Ukufumana kwakhona iphasiwedi yesiseko seSikhululo senqwelomoya ukuba awuyikhumbuli | Ndisuka mac
Ukufumana kwakhona igama eligqithisiweyo lesiseko seSikhululo senqwelomoya
UMiguel Angel Juncos | | Izixhobo, Tutorials
Zonke iziseko zesikhululo seenqwelomoya, kunye nezinye iirouters, zinobuchwephesha bokukhusela iphasiwedi useto lwenethiwekhi kunye neenkcukacha zonxibelelwano ukuze kungabikho mntu unokuziguqula ngaphandle kokuya kule nkqubo kuqala, kodwa kwenzeka ntoni xa silibala iphasiwedi?
Ngokubanzi, into esinokuyenza ukuba iyeyona ndlela ithe ngqo iya kuba kukuqala ukuzama iipaswedi ezahlukeneyo kwaye emva kwemizamo embalwa engaphumelelanga, yiya ku setha ngokutsha isikhululo seenqwelomoya ukuyiguqula kwakhona inenkunkuma eqhelekileyo yexesha ukuyishiya injalo.
Oku akusafuneki ukuba kube njalo ngenxa yenkonzo ye-keychain ene-OS X esinokuvela kuyo jonga kwi-password oyinikiweyo Logama sisazi, ewe, igama eligqithisiweyo lomlawuli wegama eligqithisiweyo, igama eligqithisiweyo lilukhuni ngakumbi ukulibala kuba lisetyenziswa ngakumbi phantse kulo naliphi na inyathelo eliguqula kancinane nayiphi na inkqubo.
Ukwenza oku, inyathelo lokuqala iya kuba kukufikelela kwifolda Izixhobo> Ukufikelela kwesitshixo. Nje ukuba singene ngaphakathi kwi-keychain access, siya kujonga iphasiwedi esiyikhangelayo, zombini idiski yenethiwekhi esiyidibanise ne-Airport Extreme umzekelo ngokungathi sisiseko seCapsule yeXesha okanye ngokulula iphasiwedi jikelele. Kwimeko nayiphi na into siya kubona ukuba kwicala lasekhohlo liphawulwe Iikiti eziphambili> Ukungena kwaye ngezantsi kudidi esiza kulishiya Amaphasiwedi, Ngale ndlela siza kujonga kwiKlasi into enje Iphasiwedi yesitishi okanye iphasiwedi yediski yesikhululo seenqwelomoya.
Xa sikufumene ukungena njengoko kubonisiwe emfanekisweni, kufuneka sicofe nje kabini ukuvula kwaye uye kwifayile Bonisa umhlaba wegama eligqithisiweyo Apho emva koko siya kucelwa iphasiwedi yomlawuli ukuze xa singena ivele.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ukufikelela kwesitshixo, into enkulu engaziwayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Ukufumana kwakhona igama eligqithisiweyo lesiseko seSikhululo senqwelomoya
Izimvo ezi-5, shiya ezakho
Muguel othandekayo, enkosi kakhulu ngoncedo endinokubona ngalo igama lokugqitha leCapsule yam yexesha
Kuhle kakhulu, enkosi !!!
Bandigcinele ixesha elininzi lokuchitha !!!
UJulie Mujica sitsho
yenzayo 6 iminyaka
Ukuba iringi yam yesitshixo ayigcinwanga. Ndizamile okuninzi isitshixo endandiqiniseke ngokuqinisekileyo ukuba sikhona kwaye akusebenzi! Ndiphelelwe lithemba ngoku ... akukho ndlela yokubuyisela kwimeko yesiqhelo?
Phendula uJulie Mujica
IMARIA FLOR sitsho
EKUSENI, YONKE INTO IYENZEKILE KWAYE KUFUNEKA NDITSHINTSHE IPHEPHA ELINGCWELE, ENKOSI KAKHULU
Phendula MARIA FLOR
Imibuliso kwaye ukuba ndinayo kwiifestile zokwenza le nkqubo enkosi
Iprojekthi entsha enomdla ivela kwiKickstarter: bind
Coca iDiski yeMemori simahla kwiintsuku ezimbalwa kwiVenkile ye App